Shopping ထွက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီ Tip လေးတွေကို လိုက်လုပ်ကြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့
စတိုင်လ်ကျတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ကျင့်သုံးလေ့ရှိတဲ့ Shopping Tip များ
9 Aug 2018 . 3:38 PM
သင်က အထာကျကျ အမိုက်စား Fashionista တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် စမတ်ကျကျ ဈေးဝယ်တတ်တဲ့ Shopper တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ကိုယ်ဘာကိုလိုချင်တာလဲ၊ ဘယ်လိုမျိုးအ၀တ်အစားကမှ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်ပြီး ကိုယ့်အတွက် မရှိမဖြစ်ထဲမှာ ပါတာလဲ၊ လတ်တလောခေတ်စားနေတာတွေက ဘာတွေလဲ စသည်ဖြင့် သေချာစိစစ်ပြီး ရွေးချယ်ဝယ်ယူတတ်မှသာ သင်က တကယ့်စမတ် Shopper တစ်ယောက်ဖြစ်မှာပါ။ စမတ် Shopper တစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ Fashionsta တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့က သိပ်မလိုတော့ပါဘူး။ အခုအောက်မှာလည်း စတိုင်လ်ကျကျ ကောင်မလေးတွေရဲ့ Shopping Tip တွေကို ပြောပြပေးထားတာဖြစ်လို့ ပိုပြီးတော့တောင် လွယ်ကူစေမှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့Shopping Tip တွေကို Upgrade လုပ်ပြီး Fashionista လေးတစ်ယောက် ဖြစ်လိုက်တော့နော်။
ကိုယ့်ရဲ့ စတိုင်လ်ကို သိပါ။
ကိုယ်က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကို ကြိုက်တာလဲ..ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လူငယ်ဆန်ဆန်ဝတ်မှာလား။ မိန်းမဆန်ဆန် ကြိုက်တာလား။ ကိုယ်ဝတ်ချင်တဲ့ပုံစံကို အမြဲသိနေဖို့လိုပါတယ်။ လူတွေက မြင်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စတိုင်လ်ဆိုတာ မှတ်မိလေ ပိုကောင်းလေလေပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ Fashion Taste ကို မှတ်သားထားပြီး Trend နောက်လိုက်မယ့်အစား ကိုယ်ကြိုက်တာတွေပဲ အသားပေးဝတ်ဆင်ပါ။
Discount တွေကို ရှာဖွေစောင့်မျှော်ပါ။
Discount တွေကလည်း သင့်ရဲ့ Budget ကို သက်သာစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Brand Sale တွေ ချတဲ့အချိန်မျိုးကို ပိုပြီး စောင့်ဆိုင်းသင့်ပါတယ်။ Sale Item တွေထဲကဆိုရင် အရမ်းဈေးချတဲ့အချိန်ဆို နှစ်ထည်စာလောက်တောင် ရတတ်တာမို့ Sale ချတဲ့အချိန်တွေကို အမြဲနားစွင့်နေပါ။ Discount သေးသေးလေးတွေကအစ ရအောင် ရှာတတ်ပါစေ။
Online ကလည်း ဈေးဝယ်ပါ။
တစ်ခါတလေ Local Store တွေမှာ မရနိုင်တာမျိုး၊ ကိုယ်တွေပြည်တွင်းမှာ မရနိုင်သေးတာမျိုးဆိုရင် Online Shop တွေကနေ ၀ယ်တတ်တဲ့အကျင့်လေးထားပါ။ ကိုယ်က အပြင်ထွက်ရမှာပျင်းတဲ့နေ့မျိုး၊ Online Sale တွေချတဲ့အချိန်မျိုး၊ကိုယ်လိုချင်တာကို ရှာရတဲ့အချိန်မျိုးဆို အရမ်းကိုအဆင်ပြေတာမို့ Online ကလည်း ဈေးဝယ်ပါ။
Branded မှ Branded မဖြစ်ပါနဲ့။
တကယ်ဖက်ရှင်ကျတဲ့သူတွေဆိုတာ Branded တွေချည်းပဲ ထည်လဲဝတ်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ Fancy ဖြစ်တာတွေ၊ ဈေးသက်သာတဲ့ အ၀တ်အစားတွေနဲ့လည်း လှအောင်၊ မိုက်အောင် ၀တ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်စိတ်ထဲမှာ Brand ၀တ်မှ ငါမိုက်မှာဆိုတဲ့ အတွေးကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီး ကိုယ့်မှာရှိပြီးသား ၀တ်စုံတွေ၊ ဈေးသက်သာပြီး Fashionable ဖြစ်စေတဲ့ အ၀တ်အစားတွေနဲ့ ရှိုးထုတ်ကြည့်ပါ။
Trend နောက်ကို အရမ်းမလိုက်ပါနဲ့။
ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းထဲမှာ နေရတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ခါတလေမှာ ရေစီးကြောင်းနောက် အရမ်းလိုက်စရာမလိုဘူး ဆိုတာကို သတိထားပါ။ ဥပမာ ပြောရရင် နိုင်ငံတကာ ဆယ်လီတွေကြားမှာ သားမွှေးကုတ်က ခေတ်စားနေလို့ ကိုယ်က လိုက်ဝယ်ပြီးမှ ကိုယ့်နိုင်ငံရာသီဥတုအနေအထားနဲ့ ဘယ်လိုမှ ၀တ်လုိ့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် ချောင်ထိုးထားရမှာပါပဲ။ အဲဒီအခါကျရင် ပိုက်ဆံလည်း အပိုကုန်ရာရောက်ပါတယ်။ ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းမှာ ခေတ်စားနေတဲ့အရာတွေက ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်နိုင်လား၊ ၀တ်လို့အဆင်ပြေလားဆိုတာ အမြဲချင့်ချိန်ပါ။
ကိုယ်လိုအပ်တာတွေကို ဘယ်မှာ ရနိုင်မလဲဆိုတာ ရှာပါ။
ကိုယ်ဝယ်ချင်တဲ့ ပစ္စည်းကို ဘယ်နေရာမှာ ရနိုင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားပါ။ ဈေးကြီးပစ္စည်းတွေချည်း သုံးမှ စတိုင်လ်ကျမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အမြဲဈေးကြီးတဲ့နေရာတွေ၊ Branded Shopတွေကို သွားဖို့မလိုပါဘူး။ပြီးရင် လိုချင်တာတွေကို အကုန်လုံးနီးပါး တစ်စုတစ်စည်းတည်း ရနိုင်မယ့်နေရာမျိုးကိုပဲ ရွေးပါ။ ဒါဆိုရင် သွားရလာရလည်း အဆင်ပြေသလို အချိန်ကုန်တာလည်း သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။
စတိုငျလျကတြဲ့ ကောငျမလေးတှေ ကငျြ့သုံးလရှေိ့တဲ့ Shopping Tip မြား
သငျက အထာကကြ အမိုကျစား Fashionista တဈယောကျဖွဈဖို့ဆိုရငျ စမတျကကြ ဈေးဝယျတတျတဲ့ Shopper တဈယောကျဖွဈဖို့လညျး လိုပါတယျ။ ကိုယျဘာကိုလိုခငျြတာလဲ၊ ဘယျလိုမြိုးအဝတျအစားကမှ ကိုယျနဲ့လိုကျဖကျပွီး ကိုယျ့အတှကျ မရှိမဖွဈထဲမှာ ပါတာလဲ၊ လတျတလောခတျေစားနတောတှကေ ဘာတှလေဲ စသညျဖွငျ့ သခြောစိစဈပွီး ရှေးခယျြဝယျယူတတျမှသာ သငျက တကယျ့စမတျ Shopper တဈယောကျဖွဈမှာပါ။ စမတျ Shopper တဈယောကျဖွဈသှားပွီဆိုရငျတော့ Fashionsta တဈယောကျဖွဈလာဖို့က သိပျမလိုတော့ပါဘူး။ အခုအောကျမှာလညျး စတိုငျလျကကြ ကောငျမလေးတှရေဲ့ Shopping Tip တှကေို ပွောပွပေးထားတာဖွဈလို့ ပိုပွီးတော့တောငျ လှယျကူစမှောပါ။ ကိုယျ့ရဲ့Shopping Tip တှကေို Upgrade လုပျပွီး Fashionista လေးတဈယောကျ ဖွဈလိုကျတော့နျော။
ကိုယျ့ရဲ့ စတိုငျလျကို သိပါ။
ကိုယျက ဘယျလိုပုံစံမြိုးကို ကွိုကျတာလဲ..ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လူငယျဆနျဆနျဝတျမှာလား။ မိနျးမဆနျဆနျ ကွိုကျတာလား။ ကိုယျဝတျခငျြတဲ့ပုံစံကို အမွဲသိနဖေို့လိုပါတယျ။ လူတှကေ မွငျလိုကျတာနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ စတိုငျလျဆိုတာ မှတျမိလေ ပိုကောငျးလလေပေါပဲ။ ကိုယျ့ရဲ့ Fashion Taste ကို မှတျသားထားပွီး Trend နောကျလိုကျမယျ့အစား ကိုယျကွိုကျတာတှပေဲ အသားပေးဝတျဆငျပါ။
Discount တှကေို ရှာဖှစေောငျ့မြှျောပါ။
Discount တှကေလညျး သငျ့ရဲ့ Budget ကို သကျသာစပေါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ Brand Sale တှေ ခတြဲ့အခြိနျမြိုးကို ပိုပွီး စောငျ့ဆိုငျးသငျ့ပါတယျ။ Sale Item တှထေဲကဆိုရငျ အရမျးဈေးခတြဲ့အခြိနျဆို နှဈထညျစာလောကျတောငျ ရတတျတာမို့ Sale ခတြဲ့အခြိနျတှကေို အမွဲနားစှငျ့နပေါ။ Discount သေးသေးလေးတှကေအစ ရအောငျ ရှာတတျပါစေ။
Online ကလညျး ဈေးဝယျပါ။
တဈခါတလေ Local Store တှမှော မရနိုငျတာမြိုး၊ ကိုယျတှပွေညျတှငျးမှာ မရနိုငျသေးတာမြိုးဆိုရငျ Online Shop တှကေနေ ဝယျတတျတဲ့အကငျြ့လေးထားပါ။ ကိုယျက အပွငျထှကျရမှာပငျြးတဲ့နမြေို့း၊ Online Sale တှခေတြဲ့အခြိနျမြိုး၊ကိုယျလိုခငျြတာကို ရှာရတဲ့အခြိနျမြိုးဆို အရမျးကိုအဆငျပွတောမို့ Online ကလညျး ဈေးဝယျပါ။
Branded မှ Branded မဖွဈပါနဲ့။
တကယျဖကျရှငျကတြဲ့သူတှဆေိုတာ Branded တှခေညျြးပဲ ထညျလဲဝတျနကွေတာမဟုတျပါဘူး။ Fancy ဖွဈတာတှေ၊ ဈေးသကျသာတဲ့ အဝတျအစားတှနေဲ့လညျး လှအောငျ၊ မိုကျအောငျ ဝတျတတျကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့စိတျထဲမှာ Brand ဝတျမှ ငါမိုကျမှာဆိုတဲ့ အတှေးကို ဖယျထုတျလိုကျပွီး ကိုယျ့မှာရှိပွီးသား ဝတျစုံတှေ၊ ဈေးသကျသာပွီး Fashionable ဖွဈစတေဲ့ အဝတျအစားတှနေဲ့ ရှိုးထုတျကွညျ့ပါ။
Trend နောကျကို အရမျးမလိုကျပါနဲ့။
ဖကျရှငျရစေီးကွောငျးထဲမှာ နရေတယျဆိုပမေယျ့ တဈခါတလမှော ရစေီးကွောငျးနောကျ အရမျးလိုကျစရာမလိုဘူးဆိုတာကို သတိထားပါ။ ဥပမာ ပွောရရငျ နိုငျငံတကာ ဆယျလီတှကွေားမှာ သားမှေးကုတျက ခတျေစားနလေို့ ကိုယျက လိုကျဝယျပွီးမှ ကိုယျ့နိုငျငံရာသီဥတုအနအေထားနဲ့ ဘယျလိုမှ ဝတျလုိ့အဆငျမပွဘေူးဆိုရငျ ခြောငျထိုးထားရမှာပါပဲ။ အဲဒီအခါကရြငျ ပိုကျဆံလညျး အပိုကုနျရာရောကျပါတယျ။ ဖကျရှငျရစေီးကွောငျးမှာ ခတျေစားနတေဲ့အရာတှကေ ကိုယျနဲ့ လိုကျဖကျနိုငျလား၊ ဝတျလို့အဆငျပွလေားဆိုတာ အမွဲခငျြ့ခြိနျပါ။
ကိုယျလိုအပျတာတှကေို ဘယျမှာ ရနိုငျမလဲဆိုတာ ရှာပါ။
ကိုယျဝယျခငျြတဲ့ ပစ်စညျးကို ဘယျနရောမှာ ရနိုငျမလဲဆိုတာ စဉျးစားပါ။ ဈေးကွီးပစ်စညျးတှခေညျြး သုံးမှ စတိုငျလျကမြှာ မဟုတျတဲ့အတှကျ အမွဲဈေးကွီးတဲ့နရောတှေ၊ Branded Shopတှကေို သှားဖို့မလိုပါဘူး။
ပွီးရငျ လိုခငျြတာတှကေို အကုနျလုံးနီးပါး တဈစုတဈစညျးတညျး ရနိုငျမယျ့နရောမြိုးကိုပဲ ရှေးပါ။ ဒါဆိုရငျ သှားရလာရလညျး အဆငျပွသေလို အခြိနျကုနျတာလညျး သကျသာသှားပါလိမျ့မယျ။
by Moethae Say . 1 hour ago
by Htet Htet .3hours ago
by yoelu . 19 hours ago
by Htet Htet . 21 hours ago